Hello Nepal News » पानीमाथि बसेको संसारकै यस्तो अनौठो बस्ती !
भनिन्छ, संसार विचित्र नै विचित्र कुराले भरिएको छ । आजसम्म हामीले एकदमै अनौठा–अनौठा घटनाबारे सुनेका छौं होला । तर, के यस्तो मानिसको समुदाय जो पानीमाथि बस्ती बसालेर बस्छ, यसबारे कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? यदि छैन भने, आज यसबारे थाहा पाउनुहुनेछ ।
अचेलका मानिसका अनेक इच्छा र रहर हुन्छन् । घरमा बस्न छाडेर सामुद्रिक पानीमा नाउँमाथि तैरिएर बस्न चाहन्छन् । चीनको दक्षिण पूर्वी इलाकामा यस्तो अनौठो बस्ती छ जहाँ, आज पनि ७ हजार मानिस पानीमाथि बस्ने गर्छन् । पानीमाथि तैरिएर बस्ने विश्वको एक मात्र यो तांका जाति माझी हुन् । यो जातिको मुख्य काम भनेकै माछा मार्र्न र खाने हो ।
केही शताब्दीअघि यो जातिले आफ्नो शासकको उत्पीडनदेखि वाक्कदिक्क भएर समुद्रमा बस्न थालेका हो । यो जाति अहिले पनि चीनको दक्षिण पूर्वी सामुद्रिक इलाकामा ७ हजारको संख्यामा आफ्नो परिवारको साथमा परम्परागत रूपमा ढुंगामाथि घर बनाएर बस्दै आएका छन् । यो जातिको बस्ती हेर्दा समुद्रमाथि तैरिरहेको अनौठो देखिन्छ ।
यो जातिले आफ्नो पूरै जीवन पानीमाथि बनेको घरमा बसेर र माछाको सिकार गरेर बिताउने गर्छ । हाल यो जातिलाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गरेर केहीलाई समुद्रबाहिर किनारामा सारेको छ । यसमा अधिक रूपमा मानिस परम्परागत रूपमै बनेको तैरिरहेको घरामाथि नै बस्न रुचाए, बाहिर बस्न मानेनन् ।
प्रकाशित मिति २५ असार २०७७, बिहीबार १४:०९